Bandy amerikanina lehibe mitapetaka ny peratra anatiny
Ny tarika hosotra amerikanina lehibe misy peratra anatiny dia misy singa roa lehibe, izay ny fametrahan-tsika amerikana lehibe sy ny peratra anatiny anatiny. Ny peratra anatiny mihoritsoritra anatiny dia vita amin'ny vy stainless steel manja avo lenta mba hiantohana ny tombo-kase tsara sy ny fahatsapana.
Fifohazana lalandava tsy tapaka
Ny fifandonana tsy miovaova tsy maharitra dia misy bandwidths roa, izay 14.2mm sy 15.8mm, ny fantsom-pasika 14.2mm dia manana takela-pandresaka 4 misy tsipika, ary ny bandwidth 15.8mm dia manana takela-bolana 5.
Famotsoran-tsakafon'ny Amerikana haingana
Ny fifamoivoizana haingana amerikana fantsom-panafody Amerikana dia 12mm sy 18,5mm, Azo apetraka tsara amin'ireo rafitra mihidy izay tsy maintsy misokatra ho fametrahana.
Famenon-tsofina karazana amerikana 14.2mm
Ity clamp ity dia havaozina nohavaozina amin'ny fomba amerikanina tsotra, miaraka amin'ny bande bande 14.2mm, ary avo kokoa ny heriny noho ny fomba amerikanina mahazatra.
12.7mm fifamenan'ny karazana Amerikana amin'ny hosotra
12.7mm fifamenam-pahefana amerikanina karazana mifampitantana dia mitovy amin'ny fanamafisana karazana menaka 12.7mm. Izy io dia vita amin'ny fitaovana matevina, fa misy fihenan-tanana fanampiny amin'ny sisin-tany. Misy ny karazany roa ny fitantanana: vy sy plastika.Handle loko dia azo atao araka ny takian'ny mpanjifa.
12.7mm clamp an'ny karazana amerikana
Ity clamp ity dia vita amin'ny fitaovana henjana lehibe, azo aorina ihany koa arakaraka ny haben'ny takiana amin'ny mpanjifa.Toa dia misy karazana kapila roa: mahazatra sy fanoherana fiverenana.
Familiana hosoka amerikana 8mm
Ny familiana amerikana kely dia manana sisin-dàlana tokana amin'ny 8mm.Izany dia miaraka amin'ny haingam-pandeha maivana, mila 2.5NM amin'ny fantsona mitombo fotsiny. Ity clamp ity dia afaka manome fampiasana azo itokisana sy maharitra, afaka manome tsindry fanamafisana avo. Ny sisin'ny kofehy dia 6 sy 6.3 mifanohitra.
Amerikana karazana fifandonana mavesatra
Ny vokatra amerikanina mavesatra be dia be no manana bandwidth misy ny 15,8mm ary rafitra matevina misy teboka efatra ary afaka mamindra hery bebe kokoa amin'ny fehikibo vy miaraka amin'ny lavaka. Ho fanampin'ny habeny eo amin'ny latabatra, azo ampiharina ihany koa arakaraka ny haben'ny takian'ny mpanjifa.